Billiqo weyn oo durbaba ka billaabatay magaalada Muqdisho kadib markii ay maleeshiyada maxaakiimta sheegeen in ay xilkoodi shacabka ku wareejiyeen, Soomaalidii fasaxa u tagay Soomaaliya iyo kuwa u guuray ee haysta jinsiyadaha shisheeye oo ka walaacsan in lagu tilmaamo argagixiso iyo masaajidyada Beledweyne oo wara aan la xaqiijin sheegayaan in la doonayo in laga dhigo goob caweys. Ruunkinet 28/12/06
Billiqo weyn ayaa la sheegay in ay durbaha ka bilaabtay magaalada Muqdisho fiidnimadii xalay ee xilliga Xamar.
Maleeshiyaad hubeysan ayaa sidoo kale Xamar ka billaabay in ay dhac iyo tacadi ka geystaan kadib markii ay maleeshiyadii maxaakiimta ku milmeen shacabka Muqdisho.
Warka ayaa intaasi ku daraya in laga cabsi qabo in uu dagaal sokeeye ka billaado magaalada Muqdisho hadii aysan dhawaan geli magaaladaasi ciidamada Itoobiya in kastoo ay jiraan maleeshiyaad hubeysan oo la filayo in ay weerar gaadmo ah kula dagaalaan ciidamada Itoobiya.
Khidada cusub ee ay sameeyeen maxaakiimta ayaan la hubin sida ay noqon doonto xaaladda Muqdisho ayadoo la sheegay in uu Maxamed Dheere sugi la' in uu cacanta ku soo dhigo Abuukar Caddaani iyo Sheekh Xasan Daahir Awees.
Dhanka kale, warar aan la xaqiijin oo aan dhawaan ka helnay magaalada Beledweyne ayaa ku waramaya in maamulka cusub ee la wareegay magaalada Beledweyne oo doonayo in uu masaajidyada ka dhigo goob lagu caweeyo.
Madaxa maamulka cusub ee magaalada Beledeyne ayaa horay u sheegay in la xalaaleeyay wax yaabihiin ay maxaakiimta horay u xaaraantimeeyay ayadoo ay dad badan u fasireen in uu ula jeeday in Quraanka la beeniyo.
Magaalada Beledweye oo ay dad badan ka qexaan kadib markii ay dhawaan degaankaasi ku dagaallameen maleeshiyada maxaakiimta iyo ciidamda Itoobiya oo ay taageerayaan maleeshiya taabacsan mudane Yuusuf Dabageed ayaa weli lagu soo noqon.